Xaafad ku taala magaaladda Göteborg oo goor dhow lugu dilay labbo ruux | Somaliska
Xaafadda Förlunda ee ku taala magaaladda Göteborg, ayaa caawa waxaa lugu dilay labbo ruux. Dilkaan ayaa yimid sida wararku sheegayaan xabaddo lugu furay.
Saacadu markeey aheyd 8.30 ayaa dhawaaqa xabaddo laga maqlayey xaafaddaasi. Booliskana waxaa ay goor dambe cadeeyeen in labbo ruux halkaasi ku dhinteen ka dib markii la dilay. Booliska iyo gar gaarka deg dega ah (aambalaasta) ayaa halkaasi gaaray, waxaana la xiray gebi ahanaba xaafaddii xabadaha laga maqlyey iyadoo ilaa iyo iminka baaritaano ay socdaan.
Walaal xalaay xataa 30 oktober waxa lugu dilaay nin caafada kamalo Göteborg kutaal markant 48 gudahooda waxa lugu dilaay 3 qofood postat raag ah.
Xaafad kale aa ja wada